प्लास्टिक प्रदुषणले निम्त्याउन सक्ने प्रलय
प्लास्टिक प्रदुशण पट्किन तयार एक 'एटम बम' जस्तै हाम्रो सामु लम्पसार परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बिशेष गरेर समुन्द्र र सामुन्द्रिक जीव–जन्तुलाई परेको देखिन्छ ।
नयाँ पार्टीको चुनौती
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको अपेक्षित एकीकरणले नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई सिंगो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि विशिष्ट महत्त्व राख्छ ।
झन्डै १३ वर्ष बितिसकेको छ । एउटा आतंकवादी समूहले इराकमा १२ नेपालीको ‘शिरछेदन’ (बिहेडेड) गरेको सनसनी खबर पाउनासाथै विचलित बनेकी थिइन्, १८ वर्षीया कमला थापा मगर । काखमा २ वर्षीया छोरी कीर्तिकालाई बोकेरै गोर्खा–५, बक्राङको भित्री गाउँघर–बस्तीमा बहुलाहीझैं कुदिरहँदा उनको बोलीमा एउटै बिन्ती सुनिन्थ्यो– कि सास चाहियो, कि लास ।
समृद्धि : अन्वेषण वा पुर्खाको सीपबाट मात्र
देश समृद्धिका ठूला कुरा भैरहेका छन् । रेलमार्गको जालो फैलने घोषणाबीच युवा वर्गलाई रोजगारी दिने चित्त बुझ्दो योजनाका विषयमा कतैबाट आस्वस्त पार्न सकेको भने देखिंदैन । युवा वर्गलाई रोजगारी दिनसकेर देशमा उत्पादन बृद्धि नहुँदासम्म समृद्ध नेपालको सपना बाड्नु ढाट्–छल मात्र हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
प्लास्टिकको प्रयोग कसरी कम गर्ने ?
२०७२ साल वैशाख १ गते सरकारले काठमाडौंमा प्लास्टिक झोलालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगायो । यसको सिकै गर्दै मुलुकका अन्य नगरपालिकाहरुमा पनि प्लास्टिकका झोला निषेधित गर्न थालियो । धमाधाम प्लास्टिक झोला नियन्त्रण अभियान चलाइयो । बोराका बोरा प्लास्टिक झोलाहरु नियन्त्रणमा लिइयो ।
खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमात्रै होइनन्, गायक पनि हुन् । गितार र हार्माेनियम बजाएर गीत गाउन रुचाउने प्रम ओली पहिले जनवादी गीत गाउँथे, अहिले धनवादी । झापाली विद्रोही हुँदा उनी निराशा, आक्रोश र क्रान्तिका गीत गाउँथे । सत्तासीन शासक हुँदा खुसी, विकास, समृद्धि र समाजवादका श्लोक ।
गएको अप्रिल २ मा भारतमा पत्याउनै नसकिने खालको आन्दोलन भयो । भारतभर चलेको आन्दोलनका दौरान १२ जनाको ज्यान गयो । भारतमा दलित आन्दोलन शिथिल भएको ठानिएका बेला एक्कासी पुरै भारत बन्दसहित आन्दोलन हुनु र १२ जना मारिनु गम्भीर घटना थियो ।
बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषण
प्रा. मुरलीगोपाल रंजितकार
मानिसले संसारमा अत्यधिक रूपमा प्लास्टिकको प्रयोग गर्न थालेको करिव ५ दशकमात्र भएको छ । सन् १९५० को दशकमा धेरै सानो परिणाममा प्लास्टिक उत्पादन गरिएको थियो । यसलाई सजिलैसँग व्यवस्थापन गरिएको पनि थियो ।